आलियाका ५ अफयेरः रणवीरसँग होला त विवाह ? – PanchKhal Online
Home/मनोरंजन/आलियाका ५ अफयेरः रणवीरसँग होला त विवाह ?
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट र रणवीर कपूरको प्रेमसम्बन्ध बाहिरिएपछि उनीहरुको विवाहलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यममा निकै चर्चा हुने गर्छ । दुवैलाई फरक–फरक कार्यक्रम तथा ठाउँमा सँगै देखिन थालेपछि उनीहरु चर्चा झन् चुलिँदै गएको छ । यसबीच, यी दुईले अभिनय गरेको फिल्म ‘ब्रम्हस्त्र’ पनि अर्को वर्षसम्म रिलीज हुने तयारीमा छ ।
यी दुईको विवाहको हल्ला समय समयमा बाहिरिने पनि गर्छ । यद्यपि, उनीहरुका परिवार विवाहको सन्दर्भमा अस्विकार गर्दै आइरहेका छन् । यी दुवै ऋषि कपूर भारत फर्किएपछि विवाह बन्धनमा बाँधिन सक्ने सम्भावना रहेको भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ ।
बलिउडमा प्रेम–सम्बन्ध, विवाह र सम्बन्धहरुलाई लिएर सधैँ विवादमा आइरहन्छन्, सेलिब्रेटीहरु । त्यसमध्ये आलियाका प्रेम सम्बन्धहरु पनि पर्छन् । उनको रणवीर कपूर पाँचौँ प्रेमी हुन् । उनका जीवनका अन्य चार युवकसँग नाम जोडिएकी आलियाका के थियो त उनीहरुसँगको सम्बन्ध ?
अरसलानः नेहा धुपियाको ‘पोडकास्ट शो’ मा आलियाले आफ्नो प्रेमीको बारेमा खुलासा गरेकी थिइन् । आफ्ना भूपूप्रेमीको बारेमा खुलासा गर्दै भनेकी थिइन्, ‘हो, अरसलान मेरो पहिलो प्रेमी हो । ऊ मायालु थियो र निकै जिद्धी पनि थियो । ऊ मलाई कुर्ता र जिन्स मात्रै लगाउन दबाब दिन्थ्यो । म उसलाई ‘स्न्याप च्याटमा’ फलो गर्छु । उ सधैँ जिममा व्यस्त रहन्छ । अहिले उ ग्राफिक डिजाइनिङ गरिरहेको छ ।’
अली दादरकरः आलिया र अली दादरकर बालपनका साथी थिए । करण जोहरको फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ द इयर’ मा सिद्धार्थ मल्होत्रा र अलीबीच झगडा भएको थियो । अली आलियालाई पुनः चाहान्थे तर उनी सिद्धार्थसँग सम्बन्धमा थिइन् ।
केविन मित्तलः सिद्धार्थ मल्होत्रासँग ब्रेकअप भएपछि रणवीर कपूरसँग प्रेम सम्बन्धको बारेमा हल्ला फैलिएपछि यस बीचमा उनी हाइक म्यासेन्जरका संस्थापक केविन मित्तलसँग नजिकिएको कारण विवादमा आएकी थिइन् । अरबपति सुनिल मित्तलका छोरा कविन मित्तल आलियासँग पहिलोपटक वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा मिलेका थिए ।
वरुण धवनः आलिया र वरुण धवनबीच सम्बन्ध नजिकिँदै गएको थियो । तर पछि करण जोहरको च्याट शोमा उनीहरुले एकअर्कासँग बसेर खाना खान पनि मन नलाग्ने बताउँन बाध्य भए ।
सिद्धार्थ मल्होत्राः सिद्धार्थ मल्होत्रा र आलिया भट्टको ‘कपूर एन्स सन्स’ को शुटिङको दौरान प्रेमसम्बन्ध सुरु भएको थियो । उनीहरुले सार्वजनिक रुपमै आफ्नो ब्रेकअपको बारेमा बताएका थिए ।
प्रियंकाको मायामा हराउँदै आर्यन